Uru uru ahia Forex | ECN Forex Trading uru na FXCC
Home / Banyere / Ihe kpatara FXCC
Gịnị kpatara FXCC? Nke a bụ ihe mere ..
E nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ anyị ndị chọrọ azụmahịa gị. Ya mere, ihe na-ekewa FXCC site na ndi ozo, gini mere anyi ji ele onwe anyi anya nke oma? Kedu ihe mere ị ga - eji na - ere ahịa site na anyị, karịa na onye ọzọ na - ere ahịa? Gịnị na-eme ka anyị bụrụ ndị pụrụ iche?
Ikwesighi ibu uzo di elu nke kwesiri onye obula iji nwee mmasi FXCC, anyi nwere okwu na FXCC; "osisi oak ndị dị ukwuu na-eto site na obere acorns". Anyị na-eji ya n'ihi na anyị ahụla ọtụtụ ndị ahịa, ndị na-azụ ahịa na anyị ebe ọ bụ na anyị malitere, na-eto anyị na-aghọ ndị ahịa.
Ya mere, obi ga-adị anyị ụtọ inyere gị aka site na ọchịchọ gị, akụkụ ọ bụla nke ọganihu ị na-eto ugbu a. New ka ahia? Biko, ka anyị malite. Ọ bụ ọkachamara na-arụ ọrụ? Anyị chere na anyị nwere ihe maka gị, ihe dị mkpa dị iche iche iji gosipụta gị.
Anyị na-eguzo n'azụ ụkpụrụ anyị nke ịbụ "onye na-ere ahịa n'akụkụ gị". Mana olee otu anyi si "n'akuku gi"? Nke mbụ, anyị chọrọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma, anyị kwesịrị ka ị nwee ihe ịga nke ọma na iji melite ma zụlite nkà gị dị ka onye ahia. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya mgbe ị na-eche banyere ya. Ndị na-enwe ihe ịga nke ọma, ndị maara ihe, ndị ahịa nwere ezigbo obi ụtọ. Ọ bụrụ na ịga nke ọma mgbe ahụ, ị ​​ga-anọgide na-azụ ahịa na anyị ma nwee obi ụtọ niile ọrụ anyị ga-enye.
Anyị bidoro ịmalite ịzụ ahịa dịka onye na-azụ ahịa dị mfe, onye kwụ ọtọ na-aga n'ihu nakwa ka anyị ruru n'ọtụtụ ebe anyị na-eto eto, anyị abawanyeala site n'ịdị mma. Dika teknụzụ nke ụlọ ọrụ anyị si aga n'ihu na-aga n'ihu ngwa ngwa, anyị enwetala ma nọrọ n'obi nke ihe ọ bụla mepụtara na nkà na ụzụ, iji hụ na anyị nọgidere na-ahụ maka njedebe nke ụlọ ọrụ anyị. Ugbu a, anyị enweela aha ọma, ma na-adabere n'ebumnuche mbụ anyị iji mee ka usoro ahia anyị dị mfe, ebe anyị na-etinye ndị ahịa anya na ihu ahịa anyị. Anyị na-emeso onye ọbụla na onye ọ bụla nke ndị ahịa anyị nkwanye ùgwù na nchebara oke.
Anyị nwere ike inyere gị aka inwe ọganihu site na ịmepụta ịzụ ahịa na ịmekọrịta kpam kpam n'ụzọ zuru oke maka ịzụ ahịa; iwu gị na-aga n'ihu ahịa ma na-adaba, enweghị nkwụsịtụ nrụrụ. Iji usoro ECN / STP anyị na-eme ka ị mara na ị na-enweta ahịa ngwa ngwa dịka nkà na ụzụ nke ugbu a nwere ike ikwe. Ị ga - enweta ọkwa kachasị mma ma jupụta ahịa ahụ na - anapụta gị, dị ka ụzọ ziri ezi ma na-ezipụ dị ka o kwere mee.
Anyị na-enyekwara gị aka ịzụlite dịka ndị ahịa site na ịnye ihe nyocha nke mbụ. Ọ bụghị ihe ndị a na-ejikọta na nkwakọba na ọnụọgụgụ nọmba, na-ebutekarị dị ka otu mgbe echere, nke ị ga-ahụ nke ndị ọzọ na-enyefe. Ma jiri nlezianya tụlee, dị mkpa na nkọwa zuru ezu, iji nyere aka mee mkpebi gị.
Anyị bụ naanị ọrụ. ECN Forex ndị ahịa na-erite uru site na obere ụgwọ kwa azụmahịa. N'ihe dị elu karịa ndị ahịa na-ere ahịa, ndị ahịa na-erepụta, nke ka elu ahịa nke onye na-ere ahịa. Ịnweta usoro ị ga - azụ ahịa na iji jupụta ngwa ngwa dị ka o kwere omume, bụ nzube anyị na ozi anyị.
Ya mere i nwere ya; ihe gbasara anyị nkwalite nke dị ka: doro anya, nkenke na nkenke dịka ọrụ onye ọ bụla anyị na-enye ndị ahịa anyị. O nwere ike ịbụ na ị gbalịrị ụfọdụ n'ime ndị ọzọ, gịnị kpatara na ị gaghị ekwe ka anyị nwee ohere gosipụta ihe kpatara anyị ji eche na anyị bụ ndị kacha mma?